Myanmar Defence Weapons: Myanmar A-5C ground attack jet
psyco April 15, 2011 at 7:01 PM
လူဆိုတာကလဲ တကယ်ကို ရယ်ရတယ်ဗျ။ ကျနော်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ လူတွေက ဟန်ရေးပြဖို့အတွက် ပိုက်ဆံတွေ သုံးဖြုံန်းနေတာကို ညည်းနေကြတယ်ဗျ။ အမေရိကန်က ဒေါ်လာသန်းချီအကုန်ကျခံပြီး အာကာသမှာ ရေးတဲ့ ဘောပင်လေးထုတ်လုပ်တာကို အပြစ်တင်ပြီး . . . . ပိုက်ဆံတပြားမှ မကုန်တဲ့ ရှရှားက ခဲတံနဲ့ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာကို ချီးကျူးကြတယ်။ စစ်တပ်မှာလဲ တကယ်တိုက်ဖို့ထက် ယူနီဖောင်းလှလှနဲ့ မျက်မှန်မျိုးစုံတပ်ပြီး လုပ်နေတာကို ဟားတိုက်ကြတယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်သား၊ တာလီဘန်တို့လို အကျီအစုတ်နဲ့ ဖိနပ်မပါပဲ တိုက်ခိုက်တာကို အထင်ကြီးကျတယ်။
ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်ကတော့ ယူနီဖောင်းမလှလို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ လယ်ထွန်စက်နဲ့ လေယာဉ်ဆွဲလို့ မကြိုက်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်။ အလုပ်ဖြစ်ဖို့က အဓိကလား. . . လူမြင်ကောင်းဖို့က အဓိကလားဆိုတာ . . . . . .
aungaung April 17, 2011 at 2:07 AM
တကယ်တော့ နှစ်ခုလုံး အရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။
mg April 17, 2011 at 4:00 AM
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေ၇ာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော နှစ်ခုလုံးပြည့်ဖို့ လိုတယ်လို့မြင်တယ်ဗျာ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းတွေမစုံလင်ရင် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်း အမြဲတမ်းတတ်ကြွ ပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာစစ်သားတွေမှာလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ဝတ္တုတွေမစုံလင်လို့ စိတ်ဓာတ်တတ်ကြွနေတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတဲ့သူတွေက များပါတယ်။သူတို့ကိုသာ ဘ၀အာမခံချက်အပြည့်စုံ လူနေမှုအပြည့်စုံပေးလိုက်ပါ။အခု စစ်တိုက်ဆို သီချင်းဆိုပြီးတောင် ရှေ့ဆုံးက သွားမယ့်သူတွေပါ။ယူနီဖောင်းက ပေစုပ်စုပ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ စစ်သားဘ၀ဟာ အများပြည်သူကြားအလယ်မှာ အထင်သေးခံရတဲ့မျက်လုံး သနားစရာလူတွေအဖြစ် အမြင်ခံနေရတဲ့သူတွေအဖြစ်ရောက်နေကြရတယ်။
ရှေ့တန်းမှာဆိုလည်း သေနတ်တစ်လက် ကျည်ဆံ ရိက္ခာကလွဲလို့ ကိုယ်ခန္ဒာမှဘာမှမပါ။ပြောချင်တာက စစ်သားတစ်ယောက်မှာရှိရမယ့် ခေတ်မှီအသုံးဆောင်စစ်ပစ္စည်းတွေပေးမကိုင်နိုင်တာကိုပါ။မြန်မာပြည်ကစစ်သားတွေဝတ်နေတဲ့ equipment ဆိုတာဟာလည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လောက်ကတည်းက သုံးနေတဲ့ equipment တွေ။ခေတ်မှီကိရိယာပစ္စည်း ဘာမှမပါပါဘူး။ခေတ်မှီတဲ့ တပ်မတော်ကြီးလို့ ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော ၀တ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်း equipment လို့ခေါ်တဲ့ချပ်ဝတ်တန်ဆာတွေက ပေစုပ်စုပ်ဖြစ်နေရင် ဘယ်သူက ခေတ်မှီတပ်မတော်လို့ ယုံမှာလဲ။အမေရိကန်စစ်သားနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ခင်မှာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းစစ်သားတစ်ယောက်နဲ့ မြန်မာစစ်သားနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တောင် ကွာဟနေတောတွေ တွေ့ရမှာပါ။
aungaung April 17, 2011 at 6:46 AM
ဒါပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် နှစ်ဆယ် လောက်က တပ်က issue လုပ်တဲ့ OG ဆိုတာအရပ်သားတွေသွားရည်ကျရတာပဲ။ ဝတ်လို့တကယ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ အင်မတန်သက်တောင့်သက်တာရှိကိုးဗျ။ ခုတော့အရောင်အစင်းကိုကစစ်ရောင်မပေါ်ကျတော့ဘူးလေ။ တပ်က issue တွေအကုန်လုံး ကတော်တော်လေးကို မကောင်းတော့ တာတော့လက်ခံရမာပဲ။ ခင်ဗျားတို့သိမလား တော့မသိဘူး အရင်က သေနတ်တိုက်ဖို့ထုတ်ပေးတဲ့အဝတ်စကိုကကောင်းတာဗျ။စကားမစပ်အပေါ်က psyco ဆိုတာလဲကျွန်တော်ပါပဲဗျာ
mg April 17, 2011 at 8:18 AM
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဆိုတာ အထက်မှာပြောခဲ့သလို ရုပ်ဝတ္တုပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ဘ၀အာမခံချက်တွေ မြှင့်တင်ပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ဘာမှမပြည့်စုံပဲ တိုက်ခိုက်နိုင်လို့ အများကချီးကျူးကြပေမယ့် အဲဒီလိုမပြည့်စုံပဲ ၀တ်နေစားနေ တိုက်ခိုက်နေရ ပင်ပန်းနေရ စိတ်ဒုက္ခများစွာရောက်နေရတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ဘ၀တွေကိုလည်း နားလည်ပေးဖို့လိုသေးပါတယ်။ချီးကျူးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ သူတို့စစ်သားတွေဘ၀တွေအတွက် မပြည့်စုံသွားပါဘူး။
ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းရော ရုပ်ဝတ္တုပိုင်းဆိုင်ရာရော နှစ်ဖက်လုံးပြည့်စုံမှ အရာရာဟာ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။စိတ်ဓာတ်တွေ ဘယ်လောက်တတ်ကြွနေပါစေ လက်နက်ပစ္စည်း နည်းပညာ ဘက်စုံနောက်ကျခဲ့လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းတစ်ပါးကျွန်းအဖြစ်နေခဲ့ရတာမဟုတ်လား။ဗီယက်နမ် စစ်သားတွေ စစ်တိုက်ဘယ်လောက်တော်တော် လက်နက်နည်းပညာသာတဲ့ အမေရိကန်အောက်ပဲ ရောက်ရသွားရတာပါပဲ။
ဒီခေတ်မှာ ကျားကျားဆိုပြီး ဓားဆွဲတတ်လို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်သလို သေနတ်တစ်လက်လေးနဲ့ဆွဲကိုင်ပြီး သွားလုပ်လို့လည်းမရပါဘူး။နည်းပညာခေတ်မှာ နည်းပညာထွန်းကားမှ တော်ကာကျမယ်။နည်းပညာဆိုတာ အရပ်ဘက်မှမဟုတ်ဘူး စစ်တပ်ထဲမှာလည်း လိုတယ်။နေရာတိုင်းမှာလိုတယ်။စစ်သားတိုင်းလည်း အသိပညာထွန်းကားဖို့လိုတယ်။ဒါမှ စစ်ရည်ပြည့်ဝမယ်။အသိပညာ ကြွယ်ဝပြီး အမြော်မြင်ရှိနိုင်မယ်။ဒါမှ နိုင်ငံ့အတွက် အားကိုးနိုင်မယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်တတ်ကြွဖို့ဆိုတာ ရုပ်ဝတ္တုမပြည့်စုံပဲ ထာဝစဉ် မတတ်ကြွ မလန်းဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။တပ်မတော်သားတွေ တိုက်ခိုက်စိတ်ပျင်းပြအောင် တပ်မှာနေရတာပျော်အောင်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး ဘ၀အခက်ခဲ အာမခံချက်တွေနဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်ရှိရမယ့် ခေတ်မှီချက်ဝတ်တန်ဆာရှိနေဖို့ပါပဲ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ တပ်မတော်က ဆင်ပေးတာမရှိပဲ ကိုယ့်ပါသာ ၀ယ်ဝတ်ဆင်မြန်းရတဲ့အတွက် တပ်နေပျော်ဖို့နေနေသာသာ ဘယ်နေ့ထွက်ပြေးရရင်ကောင်းမလဲ ဘယ်နေ့တပ်ကထွက်ရမလဲဆိုတာတွေပဲ တွေးနေကြတယ်။အချိန်မှီကုစားပြုပြင်ကြဖို့လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ကြီးအတွက် အများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်နေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း နိုင်ငံအတွက်အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့ တပ်မတော်ကြီးကိုလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်နေပြီ။
ကိုအောင်အောင်နဲ့ ကိုမောင်တို့ရေ။ ကျနော်ကတော့ ဇော်မျိုးပါ။ ကျနော့ နာမည်နဲ့ စာရေးရင် ကော်မန့်တွေက အဖျက်ခံရတာမိုလို့ နာမည်ကို ပြောင်းလိုက်တာပါ။ ကျနော်ကတော့ အမြင်မတူတာကို ရှင်းရှင်းပဲပြောတတ်တယ်။ မုန်းလို့ ရိုင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝကိုက အဲလိုပဲ ပြောတတ်လို့ပါ။
ကျနော် သိထားတဲ့ ဒီဘက်က စစ်တပ်အကြောင်းပြောပြမယ်။ တလောတုံးက အမေရိကန် လေယဉ်တင်သဘောင်္အုပ်စု မြောက်ကိုရီးယားကို ရန်စပြီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်တာမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလေယဉ်တင် သဘောအုပ်စုထဲမှာ ကျနော့အသိလဲ ပါသွားတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားက တကယ်တမ်းစပြီး တိုက်ခိုက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ တိကျတဲ့ အမိန့်လဲမပေးဘူးတဲ့။ လက်နက်အပြည့်အစုံ မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဗျ။ ရိက္ခာကလဲ တစ်ပါတ်စာတောင် မပြည့်တော့ဘူးတဲ့။ ဒါက အမေရိကန် အဖြစ်အပျက်ပါ။ Nuclear လက်နက်တွေကို အန္တာရယ်မျိုးစုံနဲ့ကိုင်တွယ်နေရတာတွေ… အီရတ်က စစ်သားတွေ ကိုယ့်ကို သတ်သေတဲ့အဖြစ်တွေလဲ ကြားမယ်ထင်ပါတယ်။
အစ်စရေး စစ်တပ် ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မျာ စစ်ရေးအမြင့်ဆုံးလို့ပြောကြတာပဲနော်။ ဒါပေမယ့် hezbollah တွေကို ၀င်ချတဲ့အခါမှာ ပြဿနာဖြစ်တာ ကြားမယ်ထင်ပါတယ်။ တင့်ကားတွေ စက်ပျက်လို့ ထားပစ်ခဲ့ရတာတွေ။ သေနတ်တွေက ပစ်လို့မရဖြစ်တာတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အစ်စရေးစစ်တပ်ထဲမှာလဲ စိတ်ဓါတ်ကျပြီးတော့ အီရန်ကို တိုက်ဖို့ အသေခံ လေယဉ်မောင်းစာရင်းပေးတာ မရှိသလောက်နည်းခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် စစ်တပ်နဲ့ အစ်စရေးတပ်ထဲမှာ ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှုတွေကလဲ အရမ်းကို ကြီးထွားနေပါတယ်။ သူတို့ စစ်တပ်တွေမှာလဲ အရမ်းကို စိတ်ဓါတ်ကျနေကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်အမြင်ပြောရရင် ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကတော့ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေကို ပြန်ကြည့်ရင် စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူဟာ ရန်သူတွေဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကလဲ ရန်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်၊ တရုတ်ကလဲ မြန်မာပြည်တွင်းရေးကို ဓါတ်ဆီလောင်းပေးနေတယ်။ ပြည်သူဆိုတာကလဲ ထမင်းတစ်လုပ်စားဖို့တောင် မနည်းရုံးကန်နေရတဲ့ အနေအထားပါ။ နိုင်ငံရေးမှာလဲ ဒီမိုနဲ့ နအဖက တံဆိပ်ကြည့်ပြီး တဖက်နဲ့ တဖက် ခါးခါးသီးသီး မုန်းနေကြပါတယ်။ ကျုပ်ကတော့ ဒီလိုအခြေအနေဆိုးကြီးမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ နယ်နမိတ်လေးရှိနေတာတောင် ကံကောင်းလှပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီတော့ စစ်တပ်အနေအထား အခုလောက်ရှိနေတာ သိပ်အဆိုးကြီးလို့တော့ မထင်မိပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ ဘေးနိုင်ငံတွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ယှဉ်နိုင်မှာလဲဗျာ? အရပ်ဖက် ၀န်ထမ်းတွေဆိုရင် စစ်တပ်ထက်တောင် ပိုပြီး ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်နေရတာပဲ မဟုတ်လားဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ အားလုံးပြည့်စုံဖို့ဆိုတာ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းမှ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်မယ့် အဖြစ်မျိုးလို့ထင်ပါရဲ့။
aungaung April 17, 2011 at 6:54 PM
အားလုံးပဲ တွေ့ ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပျက်သနာတွေ က ဘဲဥအစရှာ မရသလို မျိုး ပါပဲ။အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့် နေရုံကလွဲလို့ ဘာမမတတ်နိုင်ပါဘူး။ တနိုင်ငံ လုံး ကံကောင်းကြပါစေဗျာ။
MM April 17, 2011 at 9:05 PM
မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဖော်ပြတဲ့ဘလော့ ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စော်ကားတာမျိုးတော့ မရေးကြပါနှင့်ခင်ဗျာ။ဗမာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် အားလုံးကအတူတူတွေပါ...။နောက်ဆို C-Box လေးပြန်ဖြုတ်ထားတေ့ာမယ်ဗျာ...။အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ဆက်လက်အားပေးကြပါဦး။အစ်ကို တစ်ယောက်ပုံပို့ချင်လို့ဆို account တင်ပေးတာ ရောက်မလာသေးဘူးနော် ဟီးဟီး...တင်ချင်လို့ပါ...။
mg April 18, 2011 at 5:42 AM
ကို MM ရေ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေ အခြား နိုင်ငံရေးလိုလို ဘာလိုလိုစကားလုံးတွေကလည်း ပြောရင်းနဲ့ဆက်သွယ်သွားတတ်တယ်ဗျ။ဒါတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေတာကိုး။နိုင်ငံရေး စစ်ရေး စီးပွားရေး လူမူရေး အားလုံးက သီးခြားဖြစ်မနေဘူးဗျ။ဆက်စပ်နေတယ် ဒီတော့ တစ်ခါတစ်လေ နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးတွေ ပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ။
ကျုပ်တို့ကတော့ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကိုမှ မစော်ကားပါဘူး။တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ ခွဲခြားအသုံးနှုံးထက် အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာတွေလိုပဲ ပိုပြီးသုံးသင့် သုံးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်းဗျာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ့်လူမျိုးစုကြတော့ အင်မတန်ရိုးသားတယ်လို့ဆိုကြပြီး ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုကြတော့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ သူတို့ကပြောတတ်ကြတယ်။နောက်ပြီး ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်း သူတို့က နားမ၀င်ဘူး။ငါ့တို့မြေ ငါတို့ပြည်နယ် ငါ့တို့လူမျိုး ဆိုတဲ့ တစ်ဖက်စွန်းလူမျိုးရေးဝါဒီသမားတွေ သိပ်များတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်က မတည်ငြိမ် မစည်းလုံးပဲ စစ်မက်ပဲဖြစ်နေရတယ်။
တိုင်းပြည်မဖွံ့ဖြိုးတာဟာလည်း အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးမရှိပါဘူး။အကြောင်း ၂ ချက်ပဲရှိတယ်လို့မြင်တယ်။(၁)နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေ အသုံးမကျမှု တစ်နည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီကျကျဖော်ဆောင်မှုမရှိခဲ့လို့ ဒီလူ ဒီမျက်နှာတွေပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်နေလို့။(၂)တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိမှု(ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုမရှိမှု)။အဖြေကတော့ အဓိက အဲဒါပါပဲ။
လက်ရှိအစိုးရသစ်ကလည်း အရင်လူဟောင်းတွေ။အပြောကတော့ ရွှေမန်းပဲဗျ။လက်တွေ့ကျကျပြောင်းလဲမှုကတော့ သိပ်မတွေ့ရသေးဘူး။
ဘာကြောင့်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို မလုပ်နိုင်ရတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရဘူး။
နှစ်သစ်မှာ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေ စတင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တောင်းတမိပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာ ရန်သူဆိုတာမရှိ ရန်သူမှမိတ်ဆွေတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလာတာကိုပဲ မြင်ချင်မိပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ မြန်မာပြည်သား တိုင်းသူပြည်သားတွေ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝကျပါစေဗျာ။
ကို MM ကြီးလည်း ပိုမိုရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ။ :)
MM April 18, 2011 at 7:53 PM
ကျေးဇူးပါဘဲ...ကိုmgရေ...နိုင်ငံရေးမပြောရမဟုတ်ပါဘူးဗျာ..C-box မှာ (ကရင်၊ကချင်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊မွန်၊ကယား၊ချင်းတို့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအရေးကို ဂရုမစိုက်ပါ။ မိမိပြည်နယ်နှင့်လူမျိုးစု၏ အခွင့်အရေးပဲတောင်းဆို၏။ တောင်းတိုင်းမရသော်စိတ်ဆိုး၏။ အဆင့်နိမ့်သောနိုင်ငံသားများဖြစ်၏) ဒီစာကို တွေ့တော့ မကောင်းဘူးထင်လို့ပါ...တမျိုးမထင်ကြပါနှင့်ဗျာ...။နိုင်ငံတော်ကြီး တိုးတက်ပြီး မြန်မာတပ်မတော် တိုးတက်စေချင်ရင် နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါဝင်ရမယ်ဗျာ...။တကယ်တေ့ာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဦးဆောင်မှုပေးရမှာပါ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့က ဘက်စုံတိုးတက်ရပါမယ်...။
mg April 19, 2011 at 2:52 AM
အရှေ့တောင်အာရှမှာ နိုင်ငံအရဆိုရင် မြန်မာကကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ဒီတော့ နိုင်ငံကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှကို ဦးစီးသင့်တာ အမှန်ပဲ။အခုတော့ ကိုယ့်နောက်မှပေါ်လာတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းနိုင်ငံက ဦးဆောင်နေတာတွေ့တော့ နိုင်ငံကြီးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင် သိပ်အောက်တာပေါ့ဗျာ။
ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းကိုက စည်းလုံးမှုမရှိသေးတော့ သူများနိုင်ငံကို သွားပြီးအပြစ်တင်လို့လည်းမရဘူးလေ။ပညာရေး စီးပွားရေး စစ်ရေး ဘက်စုံတိုးတတ်အောင် ကျုပ်တို့ကြိုးစားမြှင့်တင်ကြမှ ကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အားကိုးစရာမြန်မာနိုင်ငံကြီးအဖြစ်ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်လာနိုင်မှာပါ။
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ April 19, 2011 at 7:53 PM
ကိုMMရေ။ ခင်ဗျားယူဆချက်နဲ့ ထပ်တူပါပဲ။ သူတို့တွေကို ဗမာတွေနဲ့တန်းတူ ရင်ပေါင်တန်းပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်။ ခက်တာက အတ္တတွေ သိပ်ကြီးနေတယ်။ တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံးအရေးကို လုံးဝ ထည့်မတွက်ဘူးဗျ။ ပြည်ထောင်စုစံနစ်ကို လက်မခံပဲ ဘုရင်.. ဆော်ဘွားစံနစ်ကိုပဲ လက်ခံနေကြတယ်။ သူတို့စကားပြောတိုင်း သတိထားကြည့်ပါ. . . သူတို့လူမျိုးစု အခွင့်အရေး၊ သူတို့ပြည်နယ်အရေး၊ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာပဲ တွေးခေါ်ပြောဆိုနေကြတာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ဗမာတွေအပေါ်မှာ မနာလိုမှုနဲ့ မုန်းတီးမှုကလဲ ရှိနေတယ်။ သူတို့လူနည်းစုရဲ့ အခွင့်အရေးကို တပြားတစ်ချပ်မှ မကျန်ရအောင် ရဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့်. . လူများစု ဗမာတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ဖျက်လို ဖျက်ဆီးလုပ်ချင်ကြတယ်။ ဗမာစာကို ရုံးသုံးစာလုပ်မယ့် အစား တရုတ်.. အင်္ဂလိပ်စာကို ရုံးသုံးစာလုပ်ပါလားဆိုပြီး အဓိပါယ်မရှိပြောကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ နာမည်အစား တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နာမည်ကို သုံးရမယ်တဲ့။ ဗမာနဲ့ မြန်မာက အတူတူပဲဆိုပြီး ဖင်ပိတ်ပြီး ပြောနေတယ်။ ဘယ်လိုမှ ရှင်းပြလို့မရဘူး။ အဲလောက်အထိ ဗမာတွေကို လိုက်ပြီး တွက်ကပ်နေတာဗျ။
ကျုပ်က ဗမာစစ်စစ်ပါ။ အညာမြေမှာ မွေးပါတယ်။ ကိုmgလိုပဲ . . . တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ စကားလုံးတောင် နှိမ်ချတဲ့ လေသံမျိုးဖြစ်နေလို့ ဘယ်တုံးကမှ မသုံးစွဲပါဘူး။ နယ်စပ်ဒေသက မြန်မာလူမျိုးတွေလို့ပဲ သုံးတယ်။ KNU ကို ဆဲတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်က KNU ဘက်ကနေ ကာကွယ်ခဲ့တာပဲ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေ မရောက်အောင် ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ . . . ရခိုင်တွေထက်တောင် ပိုပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘလော့မှာ ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သီချင်းတွေကို မကြာခဏတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲပြောမယ် . . .ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်ထက် အားနည်းတဲ့ သူတွေလို့ စိတ်ထဲမှာ ခံယူထားပြီး သူတို့ကို မဆဲပဲနေတာပါ။ ကျုပ်မြင်ကတော့ . . . စကားနိုင်အောင် ကပ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး. . . .အဲဒါဟာ နှိမ်ချမှုတစ်ရပ်လို့ပဲ မြင်တယ်။ သူတို့ကို ဗမာတွေနဲ့ တန်းတူထားပြီး ဆဲသင့်ရင်ဆဲပါ။ အပြစ်ပြောသင့်ရင် အပြစ်ပြောပါ။ ထို့အတူပဲ လေးစားသင့်ရင် လေးစားပေးပါ။ အလေးပြုသင့်ရင် အလေးပြုရပါမယ်။ တိုင်းပြည်အရေးမှာ ဦးထိပ်ထားပြီး ဆွေးနွေးသင့်ရင် ဆွေးနွေးရပါမယ်။ အဲဒါမှ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲလိုမှ သူတို့တွေ မြန်မာပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံးကို ဗမာတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီး လုပ်လာမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။